​रोहित र सोमपाल बिच उत्कृष्ट साझेदारी , नेपालले जित्ने संभावना ह्वात्तै बढ्यो.. – पुरा पढ्नुहोस्……
​रोहित र सोमपाल बिच उत्कृष्ट साझेदारी , नेपालले जित्ने संभावना ह्वात्तै बढ्यो..
काठमाडौं । अाइसिसी बिश्वकप छनोट अन्तर्गत अहिले नेपाल र हङकङ भिडिरहेका छन् । हङकङले दिएको १५५ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले पाँच विकेट गुमाएको छ । अहिले भने सोमपाल कामी र रोहित कुमार पौडेलले राम्रो ब्याटिङ गरिरहेका छन् । उनिहरु बिच छैटौं विकेटको लागि लगभग ४० रनको साझेदारी भएको छ ।
केहिबेर अगाडि दिपेन्द्र एेरी १२ अारिफ शेख २ कप्तान पारस खड्का ११ अोपनर ज्ञानेन्द्र मल्ल १२ अनिल शाह २६ रन बनाएर अाउट भएका थिए। यो खबर तयार गर्दासम्म नेपालले ३२ अोभरमा ५ विकेट गुमाएर १०३ बनाएको छ । अहिले सोमपाल कामी १२ र रोहित कुमार पौडेल २३ बनाएर खेलिरहेका छन् ।
यसअघि हङकङले नेपाललाई जितका लागि १५५ रनको लक्ष्य दिएको छ। बुलावायोस्थित क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले ४८.२ ओभरमा अलआउट हुँदै १५४ रन बनाएको हो। हङकङका लागि ओपनर निजाकात खानले सर्वाधिक ४७ रन बनाए।
यस्तै एहसान खानले २५, कप्तान बाबर हायतले २०, एहसान नवाजले १३ तथा तनविर अफजलले १० रन जोडे। बाँकी खेलाडीले दोहोरो अंक छुन सकेनन्।
Prevविमान दुर्घटना : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लेखे रुहाउने यस्तो स्टाट्स
Nextविमान दुर्घटना पछि बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले के भने ? हेर्नूहोस
बिचरा ! नेपाल आइडल सिजन ३ टप ८ मा पुगेʼकी रचनाका हजुरबुबा उनको बाल्यकाल सम्झेर भाबुक भए (भिडिʼयो सहित)